कुन उमेरमा कति हुनुपर्छ रक्तचाप ? – तहल्काखबर
अधिकांश घरमा खोज्ने हो भने, उच्च रक्तचापको रागी भेटिन सक्छ । बुढ्यौलीसँगै उच्च रक्तचापको समस्या देखिन थाल्छ, जो स्वभाविक हो । तर, अहिले बुढ्यौलीमा मात्र होइन, युवा र किशोरहरुमा समेत यस्तो समस्या देखिन थालिएको छ ।
खासगरी वर्तमानमा हामीले जुन किसिमको जीवनयापन भोग गरिरहेका छौं, त्यो उच्च रक्तचापको कारण बनिरहेको छ । ऐशआरमपूर्ण जीवन, प्रशोधित खानेकुराको सेवन, दिनहुँको दौडधूप आदिले हामीलाई रोगी बनाउँदैछ ।
उच्च रक्तचाप हुनु भनेको रगतको प्रवाहमा अवरोध आउनु हो । जब शरीरमा रगत राम्ररी प्रवाह हुन पाउँदैन, त्यसको भार मुटुलाई पर्छ । यसैलाई रक्तचाप भनिएको हो । अहिले यस्तो समस्या किशोरहरुमा पनि देखिन थालिएको छ ।
आधुनिक उपकरणको कारण
टेलिभिजन, भिडियो गेम, कम्प्युटर र स्मार्ट फोनको अत्यधिक प्रयोगका कारण बच्चाहरुको आउडोर गेममा रुची निकै कम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु धेरै खान्छन्, तर क्यालोरी बर्न हुन पाउँदैन । जसले गर्दा बालबच्चा तथा किशोर-किशोरीहरु मोटोपनाको शिकार बनिरहेका छन् ।
बच्चाहरुमाथि पढाईको बोझका साथै बाबुआमाले उनीहरुमाथि अपेक्षा पनि धेरै राख्छन् । यसले गर्दा उनीहरु तनावग्रस्त बन्छन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरुको रक्तचाप असामान्य बन्न पुग्छ । किशोर-किशोरी तथा युवा-युवतीहरु जब तनावले गर्दा आफूलाई असामान्य महसुस गर्छन्, उनीहरु डाक्टरको परामर्शमा गइहाल्नुपर्छ ।
-उच्च रक्तचापको कुनै स्थाई उपचार हुँदैन । यसलाई खानपानमा सुधार, स्वस्थ जीवनशैली, र औषधिबाट नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । एकपटक ब्लड प्रेसर बढेको थाहा भइसकेपछि औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्छ र डाक्टरको नियमित सम्पर्कमा बस्नुपर्छ ।
-उच्च रक्तचापको अवस्थामा दुई कुरामा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । धूम्रपानको लत र कोलस्ट्रोलको स्तर बढ्नु हृदयघातको कारण बन्ने गर्छ । त्यसैले उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरुले धुम्रपान त्यागिहाल्नुपर्छ ।
-मानसिक तनाव पनि उच्च रक्तचापको समस्याको एउटा ठूलो कारण हो । त्यसैले तनावलाई आफूमा हावी हुन दिनुहुन्न ।
– उच्च रक्तचाप भएकाहरुले खानपानमा संयम अपनाउनुपर्छ ।
-उच्च रक्तचाप भएकाहरुले खानामा नूनको मात्रा प्रतिदित ३.४ ग्रामभन्दा बढि लिनु हुँदैन । आहारामा आधा चम्चा नून कम गर्दा पनि उच्च रक्तचाप सामान्य स्तरमा आउन सक्छ ।
उमेरको हिसाबले कति हुनुपर्छ रक्तचाप ?
१५ देखि १८ वर्षसम्म
पुरुष: 117-77 mmHg
महिलाः १२०-८५ mmHg
१९देखि २४ वर्षसम्म
पुरुष: 120-79 मिमीहग
महिलाः १२०-७९ mmHg
२५ देखि २९ वर्षसम्म
पुरुष: 120-80 मिमी एचजी
महिलाः १२०-८० mmHg
३० देखि ३५ वर्षसम्म
पुरुष: 122-81 mmHg
महिलाः १२३-८२ mmHg
३६ देखि ३९ वर्षसम्म
पुरुष: 123-82 मिमीहग
महिलाः १२४-८३ mmHg
४० देखि ४५ वर्षसम्म
पुरुष: 124-83 मिमीहग
महिलाः १२५-८३ mmHg
४६ देखि ४९ वर्षसम्म
पुरुष: 126-84 मिमीहग
महिलाः १२७-८४ mmHg
५० देखि ५५ वर्षसम्म
पुरुष: 128-85 मिमीहग
महिलाः १२९-८५ mmHg
५६ देखि ५९ वर्षसम्म
पुरुष: 131-37 mmHg
महिलाः १३०-८६ mmHg
६० देखि माथि
पुरुष: 135-88 मिमीहग
महिला 134-84 मिमी एचजी
रोल्पाका नब्बे प्रतिशत महिला कृषिमा
किन बढ्दैछ सिजेरियन डेलिभरी ? सुबिधा छ भन्दैमा हतार नगर्ने कि ?
२०७४ माघ २८ गोपिन पोखरेल
प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमक खुल्ला दिसामुक्त घोषणा
२०७५ आश्विन २३ October 9, 2018 तहल्का खबर